World Photography Day (Myanmar): 2007
btw, Happy New Year 2008 !!!
Posted by Myo Kyaw Htun at Permalink |0comments |
Tags : Myo Kyaw Htun
Sunset (Highpark, Toronto)
I copied this post from ma 99sanay blog.
နောက်နှစ် ဧပြီလမှာ ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာ ကျင်းပမဲ့ ကမ္ဘာ့ဓာတ်ပုံ ပြိုင်ပွဲပါ။ တစ်ချို့ မြန်မာဘလော့ဂါတွေ ရိုက်တဲ့ ပုံတွေလဲ တော်တော်လေး ကောင်းတာတွေ့ရတယ်။ ဆုရသော်ရှိ၊ မရတော်ရှိ ကိုယ့်လက်ရာကို ကမ္ဘာ့ဓာတ်ပုံဆရာများနဲ့ ရင်ဘောင်တန်းပြီး အခမဲ့ စာရင်း ပေးသွင်းလို့ ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း၊ ဆုငွေက မက်မောချင်စရာ စတာလင်ပေါင် ၁၂၃၀၀ ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ဒီကနေ့ထုတ် မက်ထရို သတင်းစာမှာ ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ မြန်မာ့ဓာတ်ပုံရှင်အပေါင်းကို သတင်းကောင်း ပါးအပ်ပါတယ်။
Professionals and amateurs have until January to send in their best pictures for the £12,300 prize. For more details visit worldphotographyawards.org
Posted by မေ at Permalink |0comments |
Tags : may11, news
Harbor Front, CN Tower, Toronto
Tags : autumn, zenith
Tags : metro, zenith
Posted by ဇနိ at Permalink | 1 comments |
Tags : flower, zenith
Tags : park, zenith
Tags : summer, zenith
Tags : daisy, zenith
Tags : tomatoes, zenith
Tags : droplets, zenith
Tags : museum, zenith
Tags : painting, zenith
မင်္ဂလာဈေး အပေါ်ဆုံးထပ်ကနေ လှမ်းဖူးတွေ့နေရတဲ့ ရွှေတိံဂုံဘုရားကို လှမ်းရိုက်ထားလိုက်တဲ့ ပုံလေးပါ။
၀င်တော့လုဆဲဆဲ နေအရောင်က တိပ်တွေကို ရောင်ပြန်ဟပ်ပြီး လွှမ်းခြုံထားပုံက ရုတ်တရာက်ကြည့်လိုက်ရင် ဘုရားကို ဆီးမီးထွန်းပေး ထားသလိုပါပဲ
Posted by စိုးဇေယျထွန်း at Permalink |2comments |
Tags : leaf, zenith
Tags : advertisement, zenith
Cathedral and lamp_post
Tags : cathedral, zenith
Tags : acrobat, zenith
Tags : ducks, zenith
Talking about Dhamma
Tags : monks, zenith
Tags : wall, zenith
Posted by ဇနိ at Permalink |2comments |
Tags : rainbow, zenith
Tags : Scenery, zenith
Photo : Mg Ba Oo (Mandalay)
Tags : mandalay, mg ba oo, Myanmar
Photographer of photographer
ဓါတ်ပုံဆရာရဲ့ ဓါတ်ပုံဆရာပေါ့ဗျာ။ စကာင်္ပူက စုံတွဲတစ်တွဲကို ဓါတ်ပုံရိုက်နေတဲ့ ဓါတ်ပုံဆရာမကို ကျွန်တော်က ပြန်ရိုက်ထားတဲ့ပုံမှာ။ ပုံထဲမှာ တရားရုံးချုပ်ရှေ့မှာ မင်္ဂလာဦး မောင်နှံနဲ့အတူ သူငယ်ချင်းအုပ်စုလိုက် ၀ိုင်းဖွဲ့စကားပြောနေတဲ့ လူငယ်တစ်စုကိုပါ တွေ့နိုင်မှာပါ။
Posted by JulyDream at Permalink |0comments |
Tags : July Dream
လွန်ခဲ့သော နှစ်ငါးဆယ်ခန့်မှ စင်္ကာပူမီးဖိုချောင်(သို့) မပြောင်းလဲသော အမေ့မီးဖိုချောင်
Posted by ကိုငယ် at Permalink |3comments |
Tags : konge (mdy)
Tags : mandalay, mg ba oo, myanmar photo gallery
Originally uploaded by wufgaeng
ရှားပါးပြီး ကျနော်တို့အတွက်တော့ ရောက်ရန်ခက်ခဲတဲ့နေရာတစ်ခုပါ နီပေါလ် နိုင်ငံက Patan Durbar Square လို့ မိတ်ဆွေဂျာမန်ဓါတ်ပုံဆရာ Wuf Gaeng ကပြောပါတယ်။
Posted by Photographic Enthusiasts Group at Permalink |0comments |
ှ့Shwedagon at sunset
Originally uploaded by Hartfried Schmid
နိုင်ငံခြားသား Hartifried Schmid ဆိုသူရိုက်ကူးပြီး flickr ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ပုံပါ။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေရာတော်တော်များများမှာ သူရိုက်ကူးသွားတဲ့ပုံတွေကို အပေါ်က သူ့အမည်ပါ link မှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Originally uploaded by photography-by-winnaing
Almost the Bagan view seen in Yangon.
ရန်ကုန်မြို့မှာမြင်နိုင်တဲ့ ပုဂံပုံစံ ရှုခင်းတစ်နေရာပါ
Shwe Dagon Pagoda (Panoramic View)
Posted by Mg Ba Oo (Mandalay) at Permalink |6comments |
မကြာခင်မှာ ကြွေလွင့်တော့မယ့် နွေနှောင်းပန်းပွင့်လေးပါ။ ကင်မရာကတော့ Nikon D40x (with Kit objective) နဲ့ပါ။
Posted by ShweNaw at Permalink | 1 comments |
နွေမှာအလေ့ကျပေါက်တဲ့ အရိုင်းပင်လေးတွေပါ။ သူတို့ ရဲ့ ဘ၀တစိတ်တပိုင်းလေးကို ခံစားရိုက်ထားတာပါ။ fujifil finepix S5600 နဲ့ ရိုက်ထားတာပါ။
Posted by ShweNaw at Permalink |0comments |
throw water toasleepy baby but mom won't get angry
အိပ်နေတဲ့ကလေးငယ်ကိုရေလောင်းလိုက်ပေမဲ့ မိခင်လုပ်သူကစိတ်မဆိုးတဲ့အပြင် အပြုံးတောင်မပျက်တာတွေ့ ရတယ်ဗျာ
d9-come on do it harder
Thingyan is our famous festival, called in English, water festival.
ဆံတော်ရှင် ဗိုလ်တထောင်စေတီတော် ကို ပြီးခဲ့တဲ့သီတင်းကျွတ်ညက ရိုက်ကူးခဲ့တာပါ။
Innlay Phaung Taw Oo pagoda
Originally uploaded by myanmarchit
This photo was taken by myanmar chit (Ko Sai) who is an eye specialist, runningaclinic in UK. Using 10.4 wide lens on Nikkon D-200.
Photo was taken by snow,atour-guide andamember of Myanmar Photographic Society.
She asked me to share this shot on net via flickr.
Posted by Photographic Enthusiasts Group at Permalink |2comments |
Enjoying green tea at an engagement receiption ..
The glasses at Bar Counter of Inyalake Resort Hotel.
throw water toasleepy baby but mom won't get ang...